Dad kasoo baxay masjid ku yaalla waqooyiga London oo gaari la jiirsiiyay (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dad kasoo baxay masjid ku yaalla waqooyiga London oo gaari la jiirsiiyay (SAWIRO)
Hal qof ayaa ku dhintay 8 kalena waa ay ku dhaawacantay weerar gaari loo adeegsaday oo xalay lagu jiirsiiyay dad muslimiin ah oo kasoo baxay masjidka Finsbury Park ee ku yaalla waqooyiga magaalada London.
Weerarkaasi ayaa la sheegayaa inuu ka dambeeyay nin cadaan ah oo da’diisa lagu sheegay 48 jir, iyadoona booliska UK uu weerarkaasi ku tilmaamay shil aad u weyn.
Cidamada booliska ayaa la sheegayaa inay isku gadaameen goobta uu weerarka ka dhacay, iyagoona kadib gacanta ku dhigay ninka falkaasi geystay.
Dad goob-joogayaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid si ula kac ah loogu qaaday dad kasoo baxay masjidka Finsbury Park ee waqooyiga London, kadib markii ay salaadii Taraawiixda halkaasi kusoo dukadeen.
Dhinaca kale, gawaarida gurmadka deg-dega ah ayaa dadkaasi dhaawaca ah ka qaaday goobta, waxaana muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada uu muujinayay argagaxa goobtaasi ka dhacay.
Ciidanka booliska oo haatan weli ku sugan goobta uu shilku ka dhacay ayaa sheegaya inay baaritaano ku wadaan qaabka uu shilka u dhacay iyo ninka falkaasi geystay inuu maskax ahaan caafimaad qabo.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan ayaa kusoo beegmaya xilli ay maalmihii ugu dambeysay jirtay xiisad ka dhalatay dabkii dhawaan ka kacay dabaq ku yaalla xaafada Kensington ee galbeedka magaalada London, halkaas oo ay ku dhinteen dad muslimiin oo aad u badan.